Bilaogera roa mbola any am-ponja na dia efa tokony avotsotra aza · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera roa mbola any am-ponja na dia efa tokony avotsotra aza
Voadika ny 22 Janoary 2019 2:49 GMT
Didy anankiroa no navoaka tamin'ny herinandro lasa izay manalava ny fe-potoam-pigadran'ireo bilaogera Ejipsiana roa. Ny voalohany dia mbola didy fisamborana an'i Mus'ad Abu Fagr, izay nosamborina tamin'ny volana Desambra 2008. Efa nahazo didim-pitsarana manome alalana ny famotsorana azy i Abu Fagr, saingy indrisy fa narahana didy fisamborana vaovao indray izany! Nafindra tany amin'ny tobin'ny polisy Al-Arish, ao amin'ny faritra misy azy, ary avy eo tao amin'ny fonja Borg El-Arab ao Alexandria ihany koa ity bilaogera ity, ka sarotra ho an'ny fianakaviany ny mitsidika azy.
Kareem Amer, no bilaogera faharoa mijanona any am-ponja, izay nolavina ny fangatahan'ireo mpisolovavany mba hamotsotra ity tanora bilaogera ity, satria efa nahavita ny atsasaky ny saziny an-tranomaizina izy.
Tokony higadra 4 taona an-tranomaizina i Amer tamin'ny taona 2007, nitondra tena tsara araka ny tokony izy nandritra ny roa taona izy, izay tokony hanome tombontsoa amin'ny famotsorana azy araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana Ejipsiana. Andro vitsy lasa izay, nampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana ambony ny mpisolovava ao amin'ny Tambajotra Arabo ho an'ny Zon'olombelona (ANHRI) noho ny fandavan'ny fitsarana ny famotsorana ilay bilaogera.
Tsara ny manamarika fa gadraina ao amin'ny fonja iray ihany ao Alexandira i Abu Fagr sy Amer, fonja anjakan'ny fanitsakitsahan-dalàna marobe momba ny fanivaivana sy fampijaliana.